One Country, Many Partitions…? | News, Art and Ideas For Burma
One Country, Many Partitions…?
Filed under: Election, NLD, OTHERS' WRITINGS — Nyo Gyi @ 3:42 pm
မှတ်ပုံတင်ဘို ၊့၁၉၉၃ခုနှစ်ကတည်းကလက်မခံနိုင်ပါ ဟုဆိုခဲ့သော၊အခုလည်းလက်မခံဟုကန့် ကွက်ထားသော ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ‘ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်’ ပါမည်ဟုဝန်ခံလက်မှတ်ထိုးမည်၊ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ခြင်း သည် လက်ခံခြင်း၊ လိုက်နာခြင်းမဟုတ်ပါတဲ့။ ဘယ်လိုစဉ်း စားကြ သလဲ မသိပါ။ နောက်ပြီးဆိုပါ သေးသည်၊ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်လုံးလုံးစွန့် လွှတ်အနစ်နာခံပြီး အ ဖွဲ့ ချုပ် အတွက်လုပ်ကိုင် ခဲ့ကြသူများအတွက် အဖွဲ့ ဆက်ရှိရမည်တဲ့။ ထိုအဖွဲ့ ဝင်များထဲက ဘယ်သူတွေကများ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထုတ်ပစ်ပါလို့ တောင်းဆိုဘူးခဲ့ပါသလဲ။
ပြီးတော့၊ထို’ပြီးတော့’နောက်တစ် ခု သည်အရေးကြီးပါသည်။ ပြီးတော့အခုအချိန်တွင်အဖွဲ့ချုပ်ကိုအစိုးရကဖျက်သိမ်းလိုက်ပါက လည်း အဖွဲ့ဝင်များသည် မိမိကြိုက်ရာပါတီဖွဲ့ ရန် အချိန်ရှိ သေးသည်။ ထို့ ကြောင့် တရားဝင်ရပ်တည်မှုကိုလိုချင်ပါသည်ဟုဆိုသူများအားတောင်းပန်ပါရစေ